कुकुरले कुन–कुन क्षेत्रमा गर्छ अनुसन्धान र सुरक्षा ? (‘कुकुर महिमा’–भाग ३) (भिडियोसहित) « News24 : Premium News Channel
कुकुरले कुन–कुन क्षेत्रमा गर्छ अनुसन्धान र सुरक्षा ? (‘कुकुर महिमा’–भाग ३) (भिडियोसहित)
के–काम गर्छ कुकुरले ?
मान्छेबाट अपराध, कुकुरबाट अनुसन्धान– प्रहरीको तालिमप्राप्त कुकुरहरुले मान्छेबाट हुने अपराध न्यूनिकरणमा सहयोग गरिरहेका छन् । यसर्थ कुकुरले देश र जनताको सेवा गरिरहेको छ ।
ईमान्दारिता र बफादारीतामा अडिग कुकुरल सुँघेर, हेरेर साथै ती कुराहरुलाई स्मरण गरेर अपराधस्थल र अपराधी पहिल्याउने गर्छन् । यसर्थ समाजको सुरक्षामा कुकुर पहरेदार बनिरहेका छन्, बन्न सक्छन् ।
हत्याकाण्डदेखि भीआइपी÷भिभिआइपीको सुरक्षा
प्रहरी कुकुर तालिम केन्द्रमा यस्ता कुकुर छन्, जुन प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष सहयोगी बनेका छन् । प्रहरीसँग कर्तब्यज्यान अपराधमा अनुसन्धान गर्ने ट्रयाकर कुकुर छ । यसले हत्यामा फेला परेका सबुत प्रमाण सुँघेर अभियुक्तको पहिचान गरेर अनुसन्धानमा सहजीकरण गर्छ ।
लुकाएर राखिएका हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउने कुकुर पनि प्रहरीसंग छ । त्यति मात्र नभएर भीआइपी, भिभिआइपीको आवास, गस्ती, महत्वपूर्ण सरकारी भवनको सुरक्ष पनि कुकुरले नै गर्छ । त्यसैले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको कार्याक्रमस्थलमा कुकरबाट सुरक्षाजाँच गराएर मात्रै कार्यक्रम संचालन गरिन्छ । त्यस्तै हालै सम्पन्न विमस्टेक सम्मेलनमा पनि कुकुरलाई नै सुरक्षामा खटाइएको थियो ।
खोजी तथा उद्दारमा पनि कुकुर
प्राकृतिक विपद्मा परेका वा हराएका मानिसको खोजी र उद्धारका लागि प्रहरी तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गरिँदै आइएको छ । द्वन्द्वकालमा कुकुरले थुप्रै विस्फोटक पदिार्थ पत्ता लगाएको थियो भने जेलबाट कैदी भागेपछि पदचिन्ह पछ्याउ्रँदै पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । त्यस्तै दर्जनौँ हत्या काण्डमा अपराधिलाई पक्राउगर्न कुकुर सफलभएको थियो ।
सिमानाका तथा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने लागुऔषध तस्करी, सहरबजारमा लुकाइछिपाइ राखेको लागुऔष्ध फेला पार्न प्रहरीले कुकुरको प्रयोग गर्न थालेको छ । त्यस्तै ब्यबस्थापिका संसद बैठक संचालनपूर्व पनि कुकुरबाटै चेकजाँच गर्ने गरिन्छ ।
त्यसैले देशकै सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोगको सम्भाब्यता बढेको छ । नेपालमा स्रोत र तालिमप्राप्त कुकुर तथा जनशक्तिको अभावमा नयाँ प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानमा कुुकुरलाई सक्दो प्रयोग गर्न नसकिएको सत्य हो ।
पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधनको प्रयोग र परिचालन गर्न सकिए कुकुरको अनुसन्धानको दायरा र प्रभावकारिता झनै उपलब्धिपूर्ण हुने प्रहरीको विश्वास छ ।
प्रहरीले नै अनुसन्धानमा कुकुर निष्पक्ष सावित हुने बताइरहँदा केही घटनाहरुमा कुकुरको प्रयोग गर्न नसक्नु र नगरिनुले शंका जन्माएको छ । कुकुरहरु चाहिँ निष्पक्ष् ाअनुन्धानमा र प्रहरी कर्मचारी चाहीँ अपराध लुकाउन लागे भने त्यो भन्दा ठूलो लज्जाष्पद र दुर्भाग्य के हुन सक्छ । त्यसैले सकेसम्म कुकरको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छन् प्रहरी अधिकृतहरु ।
कुकुरबाट प्रहरी संगठनले पनि पाठ सिक्नु जरुरी छ । पछिल्ला अपराधका श्रृङ्खलामा प्रहरीमाथि नै शंका बढिरहेको छ ।
हामीले कसैलाई तुच्छ शब्दमा गाली गर्दा कुकुर शब्द प्रयोग गछौँ । यद्यपी, यो शब्द बोलिरहँदा समाजको पहरेदार, कर्तब्यको सदाचार अनि धार्मिक संस्कृतिको सेतुको अपमान भइरहेको छ भन्नेतर्फ हाम्रो विवेक गएको पाइँदैन । हामीलाई कुकुरको महिमा त्यतिधेरै थाहा नहुँदा हामीले कुकरको प्रभावकारिताको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । तथ्य अनुसार २४ जना मान्छेले गर्ने काम एउटा कुकुरले सम्पन्न गर्छ ।
नेपालमा कुकुर पाल्ने चलन नौलो नभई प्राचिन काल देखि कै हो । कुकुर घरपालुवा मध्येको सबैभन्दा बढि रुचाइने जनावर हो । यसलाई सभ्य, इमान्दार, बफादार र महत्वपुर्ण जनावरको रुपमा लिइन्छ । नेपालमा यसको पालनमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले अझ बढि महत्वपुर्ण मानिन्छ । पहिले गाउँघरतिर बढि पालिने कुकुर अहिले सहरमा लाखौँ तिरेर पाल्ने सोख पनि बढेको छ ।
राजधानी काठमाण्डौमा कति परिवारले कुकुर पालेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभएपनि १ लाख भन्दा बढि परिवारले कुकुर पालेको अनुमान छ । राजधानीमा एउटा कुकुरको प्रजाति हेरेर ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैँया सम्म तिरेर कुकुर पाल्ने देखिएको छ ।
विकसित देशले त कुकुरलाई अन्तरिक्षमा पठाउने जाजुसीमा लगाउने खेलकुदमा प्रयोग गर्नेदेखि अपराधि समात्नेसम्म गरिसकेको छ ।
कुकुरको सुँघ्ने र अल्ट्रा साउण्ड पनि सुन्ने सक्ने क्षमता भएकोले नै सबै काममा प्रयोग गरिएको हो । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कुकुरको महत्व हेर्ने हो भने, एउटै कुकुरको मूल्य करोडौँसम्म पर्ने गरेको छ ।
नेपालमा पनि विलक्षण क्षमताका सस्ता, महंगा कुकुरहरु छन् । तर तिनीहरुलाई कुनै तालिम दिएर भन्दा पनि शोखका रुपमा मात्रै पाल्ने गरिएको छ । त्यसमाथी राजधानीमै हेर्ने हो भने भुस्याहा कुकुरको विगविगी छ । जसले कुनै काम र अर्थ राख्दैन ।
यदि हाम्रा पालुवा कुकुरलाई पनि पुलिसले दिएजस्तै तालिम दिन सक्ने हो भने हाम्रो घरको सुरक्षामा कुकुर लाभदायक बन्न सक्छ । घरमा हुने कुनैपनि अपराध रोकथाममा सहयोगी हुन्थ्यो ।
प्रहरीले कतिपय अनुसन्धानमा प्रयोग गरेको कुुकर हाम्रै घरमा पालेका कुकुरको प्रजाति हो । मात्र उसलाई अनुसन्धनाको लागि तालिम दिने गरिन्छ । तर हामीमा त्यो चेतना नहुँदा शौखको साथन मात्र बनेको छ, कुकुर । त्यसैले कुकुरलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे हामी पनि सचेत बन्ने की ?